Enye into eqinisekile: 2016 iya kukhunjulwa, ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo, njengoNyaka ongalindelekanga. Ukusuka kwezobupolitika ukuya ekuziphatheni, akukho mntu wabona ubuninzi beza kufika xa savuka ngoJanuwari 1 kwiinyanga ezili-11 ezidlulileyo. Emva konyaka ozele ukulahlekelwa okubuhlungu kweentlanga ezithandwayo, umkhankaso ongabonakaliyo wongameli, kunye nokuncintisana okulindelekileyo, kulula ukulibala ukuba sinomnyaka omuhle kakhulu ngokwemigqaliselo yombhali. Ngamanye amazwi, ezinye iincwadi eziphawulekayo zithatha uluhlu olugqithisileyo kulo nyaka.
Uluhlu lweencwadi eziphawulekayo lude kakhulu, kubandakanyekanga kodwa ezimbini iincwadi zikaHarry Potter, i-classic entsha evela kuJohn Grisham , iimemori ezingenakwenzeka ezivela kuBruce Springsteen kunye noTrevor Noah, kunye nemisebenzi yokubhala njengesiThuthi esingaphantsi kweColson Whitehead kunye neMoonglow UMichael Chabon. Xa ukhangela emva kweencwadi eziphumayo kulo nyaka, kuyacaca ukuba yindawo enye ye-2016 engafanelekanga impumelelo. Yiyiphi, bulela ubuhle; sifuna amabala amaninzi afanelekileyo ukunamathela kunokwenzeka.
Ewe, akukho sizathu sokucinga i-2016 yayihlobo oluthile lokuhlutha. U-2015 wawungumnyaka omhle kakhulu weencwadi, kwaye i-2017 ibumba ukuba ibe yinto emangalisa kwaye inomdla. Nangona ungeke ukwazi ukuchaza kwangaphambili oko kuza kwenzeka kwihlabathi elixhalabisayo lokushicilela incwadi, kukho iibhenki ezimbalwa eziqinisekileyo esinokuzenza. Ukuba ukhangele ukuqala ukuqulunqa isicombululo seNtsha seNtsha "sifunda ngaphezulu", kukho iincwadi ezinhlanu ezaza ngo-2017 ukuba singasilungelelwanga ngokukhuselekileyo kungekuphela nje ukuba zifunde ngokumangalisayo, kodwa ziza kuba ziintengiso ezilungileyo kakhulu.
I-Roth , umbhali ongcono kakhulu wechungechunge lwencwadi ye- Divergent (eye yabona umshini we-press-less-stellar ngenxa yokukhubeka kwechungechunge lwefilimu eguqulelwe kwiincwadi) wachaza le duology entsha kunyaka odlulileyo, kunye nencwadi yokuqala kwinqaku, Candelo UMarko ushiya into yokuqala ngowama-2017. I-fanbase yeRoth ukuba inkulu, ngoko akukho nto inokungabaza ngayo lo mnye uya kudubula ngqo phezulu nangona asiyazi into eninzi malunga nayo ngaphandle kokuba uRoth-umbhali okhangayo ngokukhawuleza- ngumlobi.
Yintoni esiyayazi? Ewe, kuthelekiswa neNew War Wars , eninzi abaya kuvuma inokuba ngumqondiso ontle. I-sci-fi / fantasy hybrid, isetyenziswe kwi-galaxy yesizwe. Wonke umntu ukhulisa into eyaziwa ngokuba yi "currentgift," amandla ahlukile kubo. Uninzi lwabantu abanamhlanje lubazuzisa kubo, kodwa abambalwa abangenangqondo bahlakulela amagunya abawabekayo inceba yabo ngabemi. Ibali lihlala emibini kwimiphefumlo emibili engenakudla. U-Cyra ungudade kumtyholi onobugwenxa osebenzisa i-currentgift njengesixhobo sokuhlushwa nokuphindezela. U-Akos ilungu lohlanga oluxhamlekileyo kwilizwe leThuve; xa yena nomntakwabo bathunjwa, usebenza ngokugqithiseleyo ukukhulula zombini. Iimbali, ngokuqinisekileyo, ziyahambelana.
Ngoko, makhe sibone: i-Galaxy kude, kude, amandla angabonakali-magic, iindaba ezibuhlungu, ubukhosi obubi-yep, izandi nje ngokuba uRoth upheke umqhubi. Ekubeni uRoth ungomnye wabalobi abathandwayo abasebenza namhlanje, akukho nto iqinisekile ukuba akukho mali iya kusindiswa kulolu hlelo. Lindela ukuba izitolo zendawo zendawo zibe yiVeronica Roth Central kwiiveki ezimbalwa ngoJanuwari. Yaye ukuba ukhangele incwadi enhle yokongeza kwisihlomelo sakho soluhlu, awukwazi ukuhamba kakuhle.
Intombazana kwiTareyitha yayingenye yeencwadi ezinkulu kakhulu zango-2015 kunye no- 2016, ezithengisa iikopi ezigidi ezili-15 emhlabeni jikelele kwaye zikhuthaze ifilimu echaphazelekayo ehamba no-Emily Blunt. Iqhube i-Hawkins kwi-stratosphere yempumelelo yombhali abaninzi abalobi abaninzi baphupha-kunye nokuba yinto ephazamisayo. Emva kwakho konke, xa umxhwele wakho othobekileyo ngomfazi onxilisayo ongathembekiyo ocinga ukuba ubona ukubulala kuba yinkcubeko yesikhombiso Umntu wonke uthetha ngawo, uyayilandela njani loo nto?
I-Hawkins ayibonakali ilahlekelwe inyathelo, ingena kwi-Water ukubethela iincwadi zeencwadi ezinyangeni zikaMeyi ka-2017. Iinkcukacha zisalula, kodwa ibali libandakanya imizimba emibini efunyenwe emlanjeni kufuphi nedolophu encinane-ibhinqa nentombazana . Kufunyanwe iintsuku ngaphandle, uphando malunga nokufa kwabo lubonisa uluhlu olukhulayo lokudibanisa phakathi kwababini. Intombazana eseTareyitha idlala ngokungathembeki kokubona, ukuqulunqa i heroine esasiyazi ukuba asinakuyithembela kwanjengokuba siyixhomekeke ekufumaneni inyaniso. I-Hawkins ibonisa ukuba le ncwadana entsha iya kuhlola iingcamango ezifanayo, ngokukodwa "ukunyaniseka kwenyaniso." Akukho mntu udlala imidlalo kunye nokucingwa njengoHawkins, ngoko oku kufuneka kube yinto evuyisayo. Ngaphezu koko, udlala neengqungquthela zobuthakathi kunye nezilingo zobugqirha ezazisusa iScotland ngendlela efanayo abazitshabalalisa ama-coloni aseMerika eminyaka edlulileyo. Yongeza konke kwaye unako oko kungenzeka kube yinto enokulindeleke kakhulu yomthengi ongu-2017.
Nangona ukuba KuManzi kudala kukudumala-kwaye akukho sizathu sokuba sicinge ukuba kuya kuba-ukugqwesa okukhulu kweNtombazana kwimpumelelo yeTeetti kuya kuyenza ibe yindawo efanelekileyo yokuthengisa i-2017.
U-Silvera uyitshitshisa enkulu kunye neyokuqala, Unonwabo ngakumbi kunokuba ayikho , eyamenza ibe nkwenkwezi ye-Bona-Fide kwi-Young Adult category. Elitsha lakhe, iMbali yiyo yonke into ongishiye ngayo , iphelelwe ngoJanuwari 2017 yaye ngokuqinisekileyo iya kushaya uluhlu lwezona zinto zithengisa kakhulu, kwaye uzibethe nzima. Ukuhlolwa kokuqala kwomelele, kwaye uSilvera unesiseko esinamandla sothando, ngoko akukho nto inokuqiniseka ngayo ukuba incwadi iya kutshabalalisa.
Ibali li xelelwa nguGriffin, intombazana ejongene no-OCD kunye nokufa ngokukhawuleza kukaTheo, intombi yakhe yokuqala kunye nothando lwakhe lokwenene. UGriffin uhamba ngokukhawuleza naphakathi kwexesha elidlulileyo kunye nelikhoyo njengoko ephazamisa ukufa kukaTheo, inkwenkwe entsha kaTheo esuka kwikholeji, uJackson, kunye neyeGriffin. Iphazili likhazimulayo, iGriffin ngumlingiswa ococekileyo ngokumangalisayo, kwaye ngokuthe ngcembe inyaniso kaTheo ifika ekuxhaseni imfesane uGriffin wayenayo. Thina sonke sizithanda uthando lwethu lokuqala, sibone into ecocekileyo nepheleleyo apho kwakukho ama hormone nje, inwaba kunye nesizungu. Kodwa uSilvera ufumana ubunzulu kwibali likaGriffin eliphawulekayo.
Ungomnye wabalobi abancinci abancinci bejongene nemiba efana nokuziphatha ngokwesini, ukudandatheka, impilo yengqondo, kunye nobunzima obunzima kwaye ngokuqhelekileyo ukudibanisa imigaqo yeMillennials kunye nezizukulwana ezincinci. Unako ukuhlukaniswa ngo-YA, kodwa uSilvera ungumbhali ufanelekile ukufunda ngaphandle kwaneminyaka yobudala bakho.
Akunandaba ukuba ungumtsalane wefantasy epicycle okanye ukuba ubuke ubukele i-HBO uchungechunge lweMidlalo yeTrone , mhlawumbi uvile ngale ncwadi. Isitishi sesithandathu kwisiqulatho seMartin sinokuthi singabashicilela ngo-2017-iindumnya zihamba ngokukhawuleza kwaye zithukuthele, kodwa uMartin uye wanciphisa imveliso yakhe ngokugqithiseleyo ukusuka kwiMidlalo yeTrone yaba yimpumelelo. Kungakhathaliseki ukuba ngumbhali wembhali okanye ukungathandeki ekusebenzeni xa imali iqhutywe, abalandeli baye bavutha ngenxa yeminyaka ngoku njengoko imihla kaMartin yokukhululwa iyaqhubeka isala ngenxa yokuhamba kwakhe okuxakekileyo kunye nexesha lokushicilela.
Ngoku, ngokuqinisekileyo, uchungechunge lweTV luye lwagqithisa iincwadi, oku kuthetha ukuba amava onke okubukela ngumphathi omkhulu kunoma ubani omele le ncwadi. Abazibonisi baxelelwe ngokucacileyo malunga nezicwangciso zeMartin ekupheliseni ibali, kodwa abaninzi abafundi bafuna ukufunda iincwadi kuqala kwaye babukele umboniso kamva, njengoko bakwazi ukufikelela kule nqanaba (ngaphezulu okanye ngaphantsi) .
Akunjalo ukuba uxhaphaza ngabaphangi baya kumisa umntu ukuba athenge le nto umzuzu uhamba ngayo. Kubonakala ngathi kuhle ukuba i- Winds iya kulahla ngo-2017 ngexesha elithile, kwaye xa lenze, lindela ukuba lifike kwi-rocket phezulu kwiintlobo ezithengisa kakhulu.
Oku kungabonakala ngathi kungabonakali kakhulu ukuthengisela u-2017, kodwa enye yeencwadi ezilindeleke kakhulu kunoma ubani othanda u-Neil Gaiman (abo baseMelika baseMerika nabo bafaniswa nomabonwakude ngo-2017), iimbali zamandulo, iincwadi ze-comic, okanye, uyazi, ukubhala okuhle.
I-Gaiman nayo ikhethiweyo ngokufanelekileyo kwizinto eziphathekayo, okuyiyo ngokutsha ukuchazwa kweeNtshonalanga zeNtshonalanga zamandulo (cinga uTrkey noLoki, kodwa nge-superhero encinane). Incwadi ithatha indlela yokufunda, ixelela amabali kwisitayela samanje nesinomdla ngaphandle kokunikela ngokuchaneka kweengcamango ezindala. UGaiman ube ngumtsalane omkhulu ukususela ebuntwaneni, xa iincwadi ezindala zama-comic ezinokuthi uT Thor (enye ye- Avengers , ngokuqinisekileyo) wamphefumlela ukuba acacise ngokukodwa kwimbali yangempela yabalinganiswa kunye namabali. Wayevakaliswa ngumnye wabahleli bakhe, abacinga ukuba ukuhlolwa kwakhona kwanamhlanje kuya kusebenza kakuhle. UGaiman waphefumulelwa ngcamango kwaye wayilungisa le projekthi ngobumnandi.
Umphumo wokugqibela yincwadi entsha ngumlobi wee-comics ze- Sandman , iAnansi Boys , i- American Gods , kunye ne -Ocean Ocean ekupheleni kweNdlela , phakathi kwamanye amaninzi. Igama likaGaiman linye liqinisekisa ukuba le nto iyona nto ibhetele kakhulu ngo-2017, kodwa umxholo ongaqhelekanga kunye nophando lwangoku alulimazi amathuba akhe, nokuba.
Nangona kungekho nto enokuthi ikwazi ukukhuseleka ngokukhuselekileyo ngo-2017, into eqinisekile: Kuya kuba omnye unyaka omkhulu kwiincwadi ezinkulu. Oko kuthetha ukuba, njengokuba uluhlu lwezona zinto zithengisa kakhulu kufuneka ufunde ngokukhawuleza ngokukhawuleza ukuqhubeka.
Iingoma zeKrismesi eziKuthandayo zeClasses
Iingoma ezi-10 ezingapheliyo zeNdalo zeKrisimesi eziqhelekileyo ezingaqhelekanga
URalph Waldo Emerson: Umlobi we-American Transcendentalist noMlomo
Indlela yokuFometha nokuSebenzisa iziPhulo eziPhambili
I-Multi-Threading ku-C # Ngeemisebenzi
Ukungabi nabulungisa kunye nabahlalutyiweyo
Amaninzi aseLiberal States: Iindawo eziMbi kunazo zonke zabaNcedisi
Kutheni Ubuhlobo BamaKristu Kubalulekile?